၉.၁၁.၂၀၂၀ – နောကျဆုံးရ အာဆငျနယျသတငျးမြား စုစညျးမှု – Sports A2Z
–	အကျစတနျဗီလာကို ရှုံးနိမျ့ခဲ့တဲ့ ပှဲစဉျအပွီး သူ့ရဲ့ ပှဲကွိုခနျ့မှနျးခကျြအောကျမှာ ပရိသတျတှရေဲ့ ရေးသားမှုတှဖွေဈတဲ့ အိုဇေးလျကို လှတျပေးပါဆိုတဲ့ Tweet နဲ့ လှမျးနပွေီဆိုတဲ့ Tweet တှကေို ကှငျးလယျလူ မီဆှတျ အိုဇေးလျက Like ပေးပွီး အသိအမှတျပွုခဲ့။
–	အာဆငျနယျရဲ့ ပထမဂိုးမှာ လူပေးမှားခဲ့တဲ့အပွငျ တိုကျစဈမှာ ဘာဖနျတီးမှုမှ မလုပျနိုငျခဲ့တဲ့ ကှငျးလယျလူ ဝီလီယနျက ပှဲထှကျဖို့အတှကျ ပပေနေဲ့ အိုဇေးလျထကျ ပိုကောငျးတယျလားလို့ တှဈတာမှာ ပရိသတျတှေ တိုကျခိုကျနကွေ။
–	ပရီးမီးယားလိဂျမှာ သုံးပှဲဆကျဂိုးသှငျးပွီးတဲ့နောကျ လှဲခြျောမှုတှနေဲ့အတူ ရပျတနျ့သှားခဲ့တဲ့ လာကာဇကျကို ရောငျးခဖြို့ လလေ့ာသူတှေ တိုကျတှနျးလိုကျပွီး သူ့အတှကျ ပွောငျးရှကွေ့ေးနဲ့ လစာငှကေို စှမျးဆောငျမှုနဲ့ အခြိုးခကြွညျ့ရငျ တဈဂိုးကို ပေါငျ ၁.၄ သနျး၊ ဖနျတီးမှုတဈကွိမျကို ပေါငျ ၂.၉ သနျးနဲ့ လကျရှိအခြိနျအထိ စုစုပေါငျး ပေါငျ ၁၇၅ သနျးလောကျ ကသြငျ့နလေို့ ကုနျကစြရိတျ လြှော့ခသြငျ့ကွောငျးဆိုနကွေ။
–	သူမွငျဖူးသမြှထဲမှာ အာဆငျနယျအသငျးရဲ့ အဆိုးရှားဆုံးပုံစံနဲ့ လုပျအားနှုနျးကဆြငျးမှုကို တှမွေ့ငျခဲ့ရတာဖွဈတယျလို့ တိုကျစဈမှူးဟောငျးကွီး အီယနျရိုကျက BBC Match of the Day အစီအစဉျမှာ ပွငျးပွငျးထနျထနျ ဝဖေနျသှားခဲ့။
–	ကှငျးလယျလူ သောမတျဈ ပါတေးကို ပထမပိုငျးအပွီးမှာ လူစားလဲလှယျခဲ့ရတာဟာ နညျးစနဈပိုငျးထကျ သူ့ရဲ့ ပေါငျကွှကျသားဒဏျရာကို ရခေဲနဲ့ ကုသတာ သိပျမသကျသာခဲ့လို့ဖွဈပွီး စှနျ့စားသုံးစှဲတာမြိုး မလုပျခငျြခဲ့ဘူးလို့ အာတီတာ ရှငျးလငျး။
'I'm an Arsenal fan – my grandad won't be too happy!'
Watkins 'over the moon' after double against boyhood club. https://t.co/QD3Hy5ATPZ
— Standard Sport (@standardsport) November 8, 2020
–	အမျးမရိတျမှာ နှဈဂိုးသှငျးယူခဲ့တဲ့ ဗီလာတိုကျစဈမှူး အိုလီ ဝပျကငျးဈနဲ့ သူ့ရဲ့ တဈမိသားစုလုံးဟာ အာဆငျနယျပရိသတျတှဖွေဈကွပွီး ဒီနဂေို့းတှအေတှကျ အဘိုးနဲ့ ဦးလေးတို့ကတော့ ကနြေပျလိမျ့မှာ မဟုတျဘူးလို့ ကစားသမားက အငျတာဗြူးမှာ ပွောကွားသှား။
–	ဂိုးကနျသှငျးခှငျ့ တဈကွိမျမှ မရခဲ့တဲ့ အာဆငျနယျကစားသမားသုံးယောကျထဲမှာ တဈဦးအပါအဝငျဖွဈခဲ့တဲ့ တိုကျစဈမှူး အူဘာမီယနျးရဲ့ စှမျးဆောငျရညျက မဖွဈသငျ့ဘူးလို့ ပရိသတျတှေ သုံးသပျခဲ့ကွပွီး အာတီတာရဲ့ နညျးစနဈတှကေိုလညျး မေးခှနျးထုတျ။
–	အက်စတန်ဗီလာကို ရှုံးနိမ့်ခဲ့တဲ့ ပွဲစဉ်အပြီး သူ့ရဲ့ ပွဲကြိုခန့်မှန်းချက်အောက်မှာ ပရိသတ်တွေရဲ့ ရေးသားမှုတွေဖြစ်တဲ့ အိုဇေးလ်ကို လွှတ်ပေးပါဆိုတဲ့ Tweet နဲ့ လွမ်းနေပြီဆိုတဲ့ Tweet တွေကို ကွင်းလယ်လူ မီဆွတ် အိုဇေးလ်က Like ပေးပြီး အသိအမှတ်ပြုခဲ့။
–	အာဆင်နယ်ရဲ့ ပထမဂိုးမှာ လူပေးမှားခဲ့တဲ့အပြင် တိုက်စစ်မှာ ဘာဖန်တီးမှုမှ မလုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့ ကွင်းလယ်လူ ဝီလီယန်က ပွဲထွက်ဖို့အတွက် ပေပေနဲ့ အိုဇေးလ်ထက် ပိုကောင်းတယ်လားလို့ တွစ်တာမှာ ပရိသတ်တွေ တိုက်ခိုက်နေကြ။
–	ပရီးမီးယားလိဂ်မှာ သုံးပွဲဆက်ဂိုးသွင်းပြီးတဲ့နောက် လွဲချော်မှုတွေနဲ့အတူ ရပ်တန့်သွားခဲ့တဲ့ လာကာဇက်ကို ရောင်းချဖို့ လေ့လာသူတွေ တိုက်တွန်းလိုက်ပြီး သူ့အတွက် ပြောင်းရွှေ့ကြေးနဲ့ လစာငွေကို စွမ်းဆောင်မှုနဲ့ အချိုးချကြည့်ရင် တစ်ဂိုးကို ပေါင် ၁.၄ သန်း၊ ဖန်တီးမှုတစ်ကြိမ်ကို ပေါင် ၂.၉ သန်းနဲ့ လက်ရှိအချိန်အထိ စုစုပေါင်း ပေါင် ၁၇၅ သန်းလောက် ကျသင့်နေလို့ ကုန်ကျစရိတ် လျှော့ချသင့်ကြောင်းဆိုနေကြ။
–	သူမြင်ဖူးသမျှထဲမှာ အာဆင်နယ်အသင်းရဲ့ အဆိုးရွားဆုံးပုံစံနဲ့ လုပ်အားနှုန်းကျဆင်းမှုကို တွေ့မြင်ခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့ တိုက်စစ်မှူးဟောင်းကြီး အီယန်ရိုက်က BBC Match of the Day အစီအစဉ်မှာ ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဝေဖန်သွားခဲ့။
–	ကွင်းလယ်လူ သောမတ်စ် ပါတေးကို ပထမပိုင်းအပြီးမှာ လူစားလဲလှယ်ခဲ့ရတာဟာ နည်းစနစ်ပိုင်းထက် သူ့ရဲ့ ပေါင်ကြွက်သားဒဏ်ရာကို ရေခဲနဲ့ ကုသတာ သိပ်မသက်သာခဲ့လို့ဖြစ်ပြီး စွန့်စားသုံးစွဲတာမျိုး မလုပ်ချင်ခဲ့ဘူးလို့ အာတီတာ ရှင်းလင်း။
–	အမ်းမရိတ်မှာ နှစ်ဂိုးသွင်းယူခဲ့တဲ့ ဗီလာတိုက်စစ်မှူး အိုလီ ဝပ်ကင်းစ်နဲ့ သူ့ရဲ့ တစ်မိသားစုလုံးဟာ အာဆင်နယ်ပရိသတ်တွေဖြစ်ကြပြီး ဒီနေ့ဂိုးတွေအတွက် အဘိုးနဲ့ ဦးလေးတို့ကတော့ ကျေနပ်လိမ့်မှာ မဟုတ်ဘူးလို့ ကစားသမားက အင်တာဗျူးမှာ ပြောကြားသွား။
–	ဂိုးကန်သွင်းခွင့် တစ်ကြိမ်မှ မရခဲ့တဲ့ အာဆင်နယ်ကစားသမားသုံးယောက်ထဲမှာ တစ်ဦးအပါအဝင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ တိုက်စစ်မှူး အူဘာမီယန်းရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်က မဖြစ်သင့်ဘူးလို့ ပရိသတ်တွေ သုံးသပ်ခဲ့ကြပြီး အာတီတာရဲ့ နည်းစနစ်တွေကိုလည်း မေးခွန်းထုတ်။